Madax Beenisay Warbixin Lagu Shaaciyay Hanti Ay Qarsadeen – somalilandtoday.com
Madax Beenisay Warbixin Lagu Shaaciyay Hanti Ay Qarsadeen
(SLT-Hargeysa)-Dhowr hoggaamiye oo adduunka ah ayaa dafiray inay khalad galeen ka dib markii la soo bandhigeen dokumentiyo maaliyadeed oo aad u badan.
Dukumiintiyada “Pandora Papers” oo ah 12 milyan oo faylal – ayaa ah kuwii abid ugu badnaa ee la soo dusiyo oo noocooda ah.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo Boqorka Urdun Cabdallah II bin Al-Xuseen ayaa ka mid ah ilaa 35 hoggaamiye oo hadda jira iyo kuwii hore ee lagu kashifay faylasha.
Labaduba waxay soo saareen bayaanno sheegaya inaysan wax khalad ah samayn. Qasriga boqortooyada Urdun ayaa sheegay in aysan ahayn wax aan caadi ahayn ama aan jirin in Boqor Cabdalla uu hanti ku leeyahay dibadda.
Dukumiintiyo qarsoon ayaa muujinaya in hogaamiyaha uu si qarsoodi ah ugu kharash gareeyay in ka badan £ 70m ($ 100m) oo ah hanti boqortooyo wadamada UK iyo Mareykanka tan iyo markii uu xukunka qabtay 1999.
Af -hayeenka Kremlin -ka Dmitry Peskov ayaa dhanka kale su’aal geliyay isku halaynta macluumaadka “aan la xaqiijin”, ka dib markii uu la soo bandhigay hanti qarsoon oo lala xidhiidhiyay Madaxweyne Putin iyo xubnaha ka tirsan gudaha.
“Illaa hadda ma cadda waxa ay tahay xogtan iyo waxa ay ku saabsan tahay,” ayuu u sheegay wariyeyaasha afhayeenka Putin, isagoo intaas ku daray “ma aanan arkin hanti qarsoon oo Putin ku dhex jira”.
Xogta waxaa helay Daladda Caalamiga ah ee Saxafiyiinta Baarista (ICIJ) ee Washington DC, oo la shaqeyneysa in ka badan 140 urur warbaahineed baaritaankeedii ugu weynaa abid ee caalami ah.
Raysal wasaaraha Czech Andrej Babis, oo la sheegay lagu sheegay warbixinadan inuu leeyahay shirkad maalgashi oo ku taal xeebta taasoo laba guri ku iibsatay £ 12m koonfurta dalka Faransiiska.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, oo ay weheliyaan lix xubnood oo qoyskiisa ah – ayaa lala xiriiriyay 13 shirkadood oo ku yaal xeebo ka baxsan dalka Kenya.
Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, oo qoyskiisa iyo dadka ku dhow dhow la sheegay inay si qarsoodi ah ugu lug lahaayeen heshiisyada hantida ee UK oo qiimihiisu ka badan yahay 400 milyan oo ginni
Qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter -ka, ra’iisul wasaaraha Czech wuxuu ku sheegay in eedeymaha ay yihiin isku day lagu doonayo in lagu saameeyo doorashooyinka la qorsheeyay toddobaadkan wuxuuna ku adkeystay inuusan “waligiis sameyn wax khalad ah ama sharci darro ah”.
Mr Kenyatta ayaa sheegay in badhritaanka “uu wax weyn ka tari doono kor u qaadista hufnaanta maaliyadeed iyo furfurnaanta aan u baahannahay Kenya iyo daafaha caalamka”, wuxuuna ballanqaaday inuu “si buuxda uga jawaabi doono” warbixinadan marka uu ka soo laabto booqasho dowladeed oo dibadda ah.
Waraaqaha Pandora ma muujinayaan wax caddeyn ah oo sheegaya in qoyska Kenyatta ay xadeen ama ku qariyeen hanti dowladeed shirkadohooda xeebaha.
Dhanka kale raysal wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa wacad ku maray inuu baarayo muwaadiniinta lala xidhiidhinayo Waraaqaha Pandora. Boqolaal qof oo reer Pakistan ah, oo ay ku jiraan xubno ka tirsan golaha wasiirrada Mr Khan, ayaa lala xiriirinayaa sirta.
Waa Maxay Waraaqaha Pandora?
Waraaqaha Pandora waa kashifaada ku dhawaad ​​12 milyan oo dukumiinti iyo faylal daaha ka qaadaya hantida qarsoon iyo macaamilka hoggaamiyeyaasha adduunka, siyaasiyiinta iyo bilyaneerada.
Xogta waxaa heshay Daladda Caalamiga ah ee Saxafiyiinta Baarista ee Washington DC oo horseeday mid ka mid ah baaritaannadii ugu weynaa ee abid ka dhaca caalamka.
In ka badan 600 oo suxufi oo ka kala socda 117 dal ayaa baaray hantida qarsoon ee qaar ka mid ah dadka ugu awoodda badan caalamka.